Guurka Internet-ka oo dood badan ka dhaliyey dalka Masar!!
Culimada Islaamka ee dalka Masar iyo kuwa arrimaha Bulshada ee dalkaasi ayaa iyagu si wadajir ah uga digay guurka ay dhallinyarada Reer Masar ay ku guursadaan gabdho aysan aqoonin oo dunida daafeheeda ku kala nool iyagoo muddo yar oo kooban ku wada sheekeysanaya aaladda Internet-ka.
Culimada ayaa arrintan ku tilmaamay in dhallinyarada Reer Masar ay ku kalliftay culeyska faraha badan ee dhinaca dhaqaalaha uga yimaada marka ay doonayaan in ay si caadi ah u guursadaan. Dadka Masar waayadaan waxaa aad ugu badnaa guurka qudbo siraha iyo nuucyo kale oo fara badan, balse waayadaan dambe oo aaladda Internet-ka meel kasta ay gaartay ayaa dalka Masar waxaa ka soo ifbaxay dhallinyaro si gaar ah u daneysa barashada gabdhaha, siiba kuwa Ajnabiga ah, iyagoo markiiba isku daya in ay Internet-ka gudihiisa iska guursadaan. Tusaale ahaan wiil u dhashay waddanka Masar ayaa waxa uu Internet-ka ku bartay gabar u dhalatay dalka Australia, markii ay muddo khadka wada sheekeysiga Internet-ka ee (Online-ka) ku wada sheekeysanayeen jaceyl aan muddo jirinna ay wada dhisayeen ayaa ugu dambeyntii lagu heshiiyey in la is guursado, isagoo guurku ka dhacay Internet-ka, muddo kaddibna ay gabadhii iyaduna go’aansato in ay timaaddo dalka Masar, si ay ula aqal gasho ninkeeda.
Guurkan ayay culimadu ku sheegeen in uu dhibaatooyinkiisa wato, marka ugu horreysa waxa ay caddeeyeen in uu sharciyan uusan guurkaasi ansax ahayn marka loo fiiriyo shuruudaha guurka ee Shareecada Islaamka, mararka qaarna waxaa timaadda in wiilka reerkiisu ayba ku diidaan in uu guursado gabar ajnabiyad ah oo aan wax dhaqan ah la wadaagin dalka Masar, dhinaca kalena aan wax qurux ah lahayn, mararka qaarna ayba dhacdo in wiilka iyo gabadhu ay u dhexeyso illaa tobaneeyo sano. Culimadu waxay kaloo sheegeen in guurkani uu ku soo geba-geboobo fashil. Khabiir ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo arrimaha bulshada Dr. Muxsin Al-Carqaan waxa uu yiri “Guurka Internet-ka waxa uu ka mid yahay dhibaatooyinka guur ee waayadaan ku soo kordhay dalka Masar, sida muddooyinkaanba uu ugu dhex faafay guurka qudbo siraha ah, waxaana guurka Internet-ka la mid yahay dab xaabo la qabadsiiyey, taas oo ay dhallinyaradu ay u arkaan in ay uga baxsanayaan dhibaatada dhaqaale ee guurka”.
Dhallinyarada qaarkood ayaa is tusisa in guurkan ay ku helayaan gabar qurux badan oo la mid ah gabdhaha jila Aflaamta, iyadoo is barashadooduna ay tahay mid yar oo kooban, waxaa hore u dhacay dhowr guur oo dhinaca Internet-ka ah oo ay ku kulmeen wiilal Reer Masar ah iyo gabdho Ajaanib ah oo dhammaantoodna ku dhammaaday fashilaad, iyadoo mararka qaarna ayba dhacdo gabdhaha oggolaanayo guurkan deg-degga ah in ay badidoodu yihiin kuwo guumeys ku noqday dalkooda ama qaarkood ay qabaan cudurro Qatar ah. Dr. Cabdul Cadiim Al-Mudcani oo ah macallin wax ka dhiga Jaamacadda Al-Azhar ayaa waxa uu yiri “Guurkan oo ay Internet-ka iska guursanayaan wiilasha iyo gabdhaha waa Baadil, wax raad ah oo uu sharciga Islaamka ku leeyahayna ma jirto”. Wiilasha iyo gabdhaha isku barta ayaa markii ay ku heshiiyaan in ay is guursadaan goobta qof kasta uu joogo uu keenaa markhaatiyaal, iyadoo aysan joogin waalidiintooda, halkaana uu ka dhaco guurka, iyadoo qof kastana uu joogo dalkiisa, taasina sharci ahaan ma bannaana, waxayna culimadu ku tilmaameen guurka sidan ku dhaca in uu yahay laba qof oo kala zineysanaysa
Fadeexada Paltalkga: iyo Dulmiga Walaasha Muslimada ah: